Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nkume na taya ụgbọ ala gị? N'ihi ya, m mere ya n'ụzọ a-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ nkume na taya ụgbọ ala gị? N'ihi ya, m mere ya otu a
Oge: 2021-04-19 Hits: 13
N'oge ememme oge opupu ihe ubi, ụfọdụ ndị nwe ha ga-agbaga n'okporo ụzọ obodo na n'okporo ụzọ na-adịghị ọcha, a na-agbasokwa nsogbu ahụ, ọka taya taya ụgbọ ala dị n'ime banyekwara n'ọtụtụ obere okwute!
N'ezie, anyị kwesịrị ịmara na ọrụ ụdịrị taya bụ ime ka njigide nke taya ụgbọ ala ka mma, mana ọ na-emekwa ka ọrụ mwepu taya na ike ikpo ọkụ.Tiregbọ ala ụgbọala na-azọ ije ogologo oge ịkwọ ụgbọala ga-enwekwa akwa na akwa, nke ka njọ bụ iji dochie anya.
Ọ bụrụ na enwere obere okwute na taya ụgbọ ala, ọrụ nsị na njide ọka na-ebelata, yana ụfọdụ ebe na-amị amị dị mfe ịpụta ihe egwu dị na nchekwa!
Ọbụghị naanị nke ahụ, ọ bụrụ na okwute ahụ karie, a ga-enwe ike ịda mba mgbe ị na-anya ụgbọala, enwere ọtụtụ okwute dị nkọ, na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, nwere ike ịbụ taya nke dị na mpụga roba ka ọ kpọpu, ọ bụrụ na a ga-asị taya ọkpọ ahụ, a ga-enwekwa ihihi.Ke adianade do, ọ bụrụ na-asị na nchara waya n'ime mebiri emebi dịtụ, na-enwe ike iweta ihe gbawara taya!
Olee otú ikpochapụ nkume rapaara na taya?Isi okwu a na-abaghị uru ọ bụla iji gaa igodo ahụ iji dọpụta ịdọrọ, wee jiri screwdriver wee gbagoo ngwa ọrụ ndị a, mana anyị kwesịrị ị paya ntị iji gbochie iji ngwa ọrụ dị nkọ, nwere ike ibute mbibi ahụ, ma ọ bụrụ na mgbapu na usoro nke igwu ala dịkwa egwu!
Morezọ a pụrụ ịdabere na ya karị bụ ịga ụlọ ahịa na-arụzi ụgbọala nwere ike ịhapụ ka nna ukwu ahụ daa gas ka ọ hapụ ụfọdụ, wee pịa taya ụgbọ ala ma ọ bụ kụọ ọkụ ọkụ, okwute dị mfe ịgbada, ọ dịghịkwa mfe imebi taya!
N'ezie, taya abụghị ihe ị chere maka ụdị na-emebi emebi, enwere ọtụtụ nke ha ga-esokwa ụgbọ ala ahụ ka ha gbanwee ihu ha.Agbanyeghị, n'ihi ihe egwu nchekwa, mgbe ụfọdụ ọ kacha mma ihichachi anya, nwere ike ọ gaghị adịcha njọ!
Ọzọ: Ndụmọdụ maka ịrụzi taya ụgbọala